Nezvedu - Shandong Nisen Trade Co., Ltd.
Shandong Nisen Trade Co., Ltd. iri mune rakanaka chitubu guta ---- Jinan.
Iri bhizinesi, iro raiita mukupa vatengi one-stop Window kugadzira mhinduro mupiki.
Nisen ikambani iri kuita R & D, kugadzira, kutengesa kweupvc & aluminium hwindo yekugadzira muchina, inodzivirira girazi yekugadzira girazi uye hwindo musuo Hardware etc.
"Ku kupa mutengi nehunhu, kufambira mberi nesosaiti, kukura nevatengi, kusimudzira pamwe nechikwata "Ndicho hwaro hunoshandisa manejimendi yeShandong Nisen Trade Co, Ltd. muzvinhu zvese.
Isuipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro & masevhisi ane kukosha kwemari, uine ruzivo rwakakura pamusoro pevanonetsekana. Isu tinozivikanwa nesisitimu yedu yemhando yemadhoo & windows kugadzira michina.
Isu tinoshandisa mweya wemhizha kuita basa rakanaka rechigadzirwa, uye takazvipira kukupa iwe hwakanakisa chigadzirwa uye masevhisi.
Kunze kwekuita mukupa michina & maturusi uye mahwindo akaomarara masuo, yedu kambani inowedzerawo mukupa vatengi vedu mhinduro dzinoshanda & dzinodhura, dzinobatsira mune zvazvino zveindasitiri zvinodiwa nevatengi vedu vanokosha.
Tine timu yakasarudzika yehunyanzvi uye ine hunyanzvi iyo inotibatsira kupa mhedzisiro inogutsa kune vatengi vedu.
Isu tinogara tichigara tichitarisa maziso nezve izvo zvinodiwa & zvinodiwa nevatengi vedu, vatengi maitiro & musika mhinduro.
Kambani & KUSVIRA KWEMUDZIDZO